Published Fri Aug 16 2019 15:47:37 GMT+0000 (UTC)
"There is not going to be any rest until we achieve a people's government...we will continue to mobilize," said Chamisa at a press conference, following a day of clashes between police and opposition demonstrators.
A woman shows her identity card to a police officer in Harare, Friday, Aug. 16, 2019. Zimbabwe's police patrolled the streets of the capital Friday morning while many residents stayed home fearing violence from an anti-government demonstration planned by the opposition. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Riot police arrest and forcibly apprehend protestors during protests in Harare, Friday, Aug. 16, 2019. The main opposition Movement For Democratic Change party is holding protests over deteriorating economic conditions in the country as well as to try and force Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa to set up a transitional authority to address the crisis and organize credible elections. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Protesters run from teargas fired by riot police during protests in Harare, Friday, Aug, 16, 2019. Zimbabwe's police fired tear gas to disperse anti-government protesters in the center of the capital, Harare, Friday morning. A few hundred demonstrators gathered in Africa Unity Square, despite a police ban on the protest that was upheld by Zimbabwe's High Court. (AP Photo/KB Mpofu)
Riot police round up demonstrators during protests in Harare, Friday, Aug, 16, 2019. Zimbabwe's police patrolled the streets of Harare Friday morning while many residents stayed home and shops were shut fearing violence from an anti-government demonstration. Zimbabwe's High Court has upheld the police ban on the opposition protest.(AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
An armed riot policeman gestures to a pedestrian in Harare, Friday, Aug, 16, 2019. Zimbabwe's police patrolled the streets of Harare Friday morning while many residents stayed home and shops were shut fearing violence from an anti-government demonstration. Zimbabwe's High Court has upheld the police ban on the opposition protest.(AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Police stop and search vehicles at a check point ahead of a planned protest in Harare, Friday, Aug. 16, 2019.. Zimbabwe's police patrolled the streets of the capital Friday morning while many residents stayed home fearing violence from an anti-government demonstration planned by the opposition. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Riot police patrol the streets during protests in Harare, Friday, Aug, 16, 2019. Zimbabwe's police patrolled the streets of Harare Friday morning while many residents stayed home and shops were shut fearing violence from an anti-government demonstration. Zimbabwe's High Court has upheld the police ban on the opposition protest.(AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
People walk past armed riot police in Harare, Friday, Aug. 16, 2019. Zimbabwe's police patrolled the streets of the capital Friday morning while many residents stayed home fearing violence from an anti-government demonstration planned by the opposition. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Armed riot police gather at a check point ahead of a planned protest in Harare, Friday, Aug. 16, 2019. Zimbabwe's police patrolled the streets of the capital Friday morning while many residents stayed home fearing violence from an anti-government demonstration planned by the opposition. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
A riot police gives direction to a driver in Harare, Friday, Aug. 16, 2019. Zimbabwe's police patrolled the streets of the capital Friday morning while many residents stayed home fearing violence from an anti-government demonstration planned by the opposition. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Zimbabwean riot police block a road ahead of a planned protest in Harare, Friday, Aug. 16, 2019. Zimbabwe's police patrolled the streets of the capital Friday morning while many residents stayed home fearing violence from an anti-government demonstration planned by the opposition. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Armed riot police patrol the streets ahead of a planned protest in Harare, Friday, Aug. 16, 2019. Zimbabwe's police patrolled the streets of the capital Friday morning while many residents stayed home fearing violence from an anti-government demonstration planned by the opposition. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
People cross a road with a wheelbarrow near a police check point ahead of a planned protest in Harare, Friday, Aug. 16, 2019.. Zimbabwe's police patrolled the streets of the capital Friday morning while many residents stayed home fearing violence from an anti-government demonstration planned by the opposition. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
A red cross vehicle arrives to attend to an injured man during protests in Harare, Friday, Aug, 16, 2019. Zimbabwe's police patrolled the streets of Harare Friday morning while many residents stayed home and shops were shut fearing violence from an anti-government demonstration. Zimbabwe's High Court has upheld the police ban on the opposition protest.(AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Riot police arrest and forcibly apprehend protestors during protests in Harare, Friday, Aug, 16, 2019. The main opposition Movement For Democratic Change party is holding protests over deteriorating economic conditions in the country as well as to try and force Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa to set up a transitional authority to address the crisis and organize credible elections. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
A woman lies in the road after been injured by police during protests in Harare, Friday, Aug, 16, 2019. The main opposition Movement For Democratic Change party is holding protests over deteriorating economic conditions in the country as well as to try and force Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa to set up a transitional authority to address the crisis and organize credible elections. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
A young boy runs away from teargas during protests in Harare, Friday, Aug, 16, 2019. Zimbabwe's police patrolled the streets of Harare Friday morning while many residents stayed home and shops were shut fearing violence from an anti-government demonstration. Zimbabwe's High Court has upheld the police ban on the opposition protest.(AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
A riot police man kicks out at a man during protests in Harare, Friday, Aug. 16, 2019. The main opposition Movement For Democratic Change party is holding protests over deteriorating economic conditions in the country as well as to try and force Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa to set up a transitional authority to address the crisis and organize credible elections. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
A newspaper vendor reads a copy of a daily paper as police block a main road ahead of a planned protest in Harare, Friday, Aug. 16, 2019. Zimbabwe's police patrolled the streets of the capital Friday morning while many residents stayed home fearing violence from an anti-government demonstration planned by the opposition. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Protestors gather on the streets in Harare, Friday, Aug. 16, 2019. The main opposition Movement For Democratic Change party is holding protests over deteriorating economic conditions in the country as well as to try and force Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa to set up a transitional authority to address the crisis and organize credible elections.(AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)